Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: #OromoRevolution; Muudama Moo Muddama?
(Dammaqaa Nagaasaa tiin)
Muudamni Itti Fakkeessii Mootummaa Faashistii Abbaa Irree Wayyaanee gola Paarlamaa Sobaa Keessatti Har'a Gaggeesse Diramaa jechuuf Illee Diramaan hojii ogummaa artii waan ta'eef, Muudama_muddama hiika hin qabneefi Wayyaanee kufaatii isaa dhumaa irra jiru kufaatii irraa kan hin olchine ta'uun beekamadha. Ammas Injifannoon Qabsoo Warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa FXGn mootummaa wayyaanee muddee qabee of ijibbachisaa jiruu daranuu itti jabaatee itti fufa. Mudamni fi Muddamni Kunis waan nama raajuu hin qabu, Gdhugaan jiru garuu yeroo kanatti biyyattiin mootummaa hin qabdu.
1. Har'a biyyattiin maqaa labsii muddama(State of Emergency ) jedhuun ifatti Waraanni uummata irratti labsamee uummata ulee of harkaa hin qabne irratti guyyaa guyyaan Waraanni irratti Banamee lubbuun wareegama, hidhaman, saamamaa fi yakka shororkeessaa waraanaan hiraarfama guddaa keessa jira uummatni!!
2. QEERROON BILISUMMAA OROMOO fi Uummatni OROMOO Qabsoon hanga bilisummaatti dhumnee dhabamna malee hiraarsa waraanaan duubatti hin deebinu jechuun falmaan hadhaawaan Oromiyaa keessatti itti fufinsaan gaggeeffama jira.
3. Paarlaamaan Wayyaanee EPRDF/TPLF Uummata biyyatti akka bakka hin buunee fi aantummaa uummataa hin qabne Yakka guyyaa guyyaatti Uummatarratti waraana Bobbaasuun ajjeechaa jumlaa, hidhaa fi hiraarsa rawwacha jiraniin ragaa bahani jiru. Ragaan kana caale hin jiru.kanaafuu waan Paarlaamaan Wayyaanota kun dabarsu uummata biyyatti walii galatti bakka hin bu'u. Namas hin ajaa'ibu.
4. Uummataa dhiiga dhangalaasaa jirtuu irratti har'a Har'a garuu wal guurtee yeroo muuddama keessa seentee wal muudaa jirra jettuu hin qaanuuftuu?????? Furmaatni roga kanaan dhufu gingilchaan Bishaan waraabuudha!!
5. Gaaffiin uummataa Oromoo walumaa Galatti gaaffii bilisummaa fi walabummaa dha. jijjiiramni Sirna kallattiin akka dhufuu fi mootummaa uummata bakka bu'uu kan bilisummaa fi mirga uummattoota tiksuu gadi dhaabuuf qabsoo godhamudha.
6. Ammas kufaatii oltee hin bulleef boruu dhufaa jirtuuf wayyaaneen akka nama Bishaan nyaatee hoomacha qabata jedhanii ta'aa jirtu kun yeroon aangoo gadi lakkisuu qofatu furmaata waarawaati malee aangoo irraatti achumaa wal mummuduu fi mummuddamuun qabsootti daranuu uummataafi Qeerroo kan jabeessuu ta'uu ni hubachiifna.
7. Teessoon Paarlaamaa Sobaa wayyaanee kun hatattamaan diigamee facaa'uu qaba malee utuu 21 mitii 1000 iyyuu mudee gurrii dhaggeeffatuu hin jiru hiikaa tokko illee hin qabu!!
Posted by Hasan Ismail at 8:14 AM